အခုလူဖြစ်နေတဲ့ သူ အားလုံး လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ခန့်က ဘ ဝ တခုမှာ အတူတူဆုံဖူးခဲ့ကြတယ် – Shwewiki.com
လွန် ခဲ့တဲ့ သာသနာနှစ် ၂၆၀၀ ခန့် က ခု လူဖြစ်နေသူအားလုံး ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှာ တီထွေးဘဝနဲ့အတူဆုံဖူးကြတယ် ဆိုရင် လက်ခံကြလား?? လက္ခံ မခံ အသာထား ဗဟုသုတ ပြောပြမယ်! ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရား ပွင့်စဉ် အချိန်တစ်ခုက “အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်နဲ့ ဗုဒ္ဓ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ကို ရောက်စဉ်က တောင်ခြေက တီထွေးစုကြီးကို သွားမြင်တယ် တီထွေး တွေ များလွန်းလို့အံ့သြလို့ အရှင်သာရိပုတ္တက ဘုရားကို ဒီတီထွေးတွေအကြောင်း မေးလျှောက်တယ်”
ဗုဒ္ဓက “ချစ်သား သာရိပုတ္တ” ဒီတီထွေးတွေက “ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး သာသနာနှစ် ၅၀၀၀ အတွင်းလူ့ ပြည်မှာ လူဖြစ်ပီး အချို့ ကျွတ်တန်းဝင်ကြလိမ့်မယ်… ဒီတီထွေးတွေ လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ဝတ္ထုတွေက နတ်ပြည်အလား တိုးတက်မယ် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေတော့ အားကြီးမယ်။ အချို့ တွေက ငါဘုရားရဲ့ တရားတွေနာပြီး ကျွတ်တန်းဝင်ကြမယ်။ ကျန်လူများကတော့ ဒီ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ခြေမှာပဲ တီထွေးပြန်ဖြစ်မယ် “လို့အရှင်သာရိပုတ္တကို ဗုဒ္ဓဟောပြခဲ့ဖူးတယ်။
ပြီးတော့ ဂင်္ဂါဝါဠုသဲစုမက ပွင့်ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တွေက သာသနာချန်တာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဂေါတမဘုရားရှင်သာ အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့် သာသနာချန်ခဲ့တာ… သက်တမ်းတစ်သောင်းတုန်းက ဘုရားက ပါရမီပြည့်လို့ ဘုရားဖြစ်ခွင့်ကြုံတယ်။ ပါရမီ ဖြည့်ဘက် သာဝကတချို့က ပါရမီ မပြည့်သေးတာကြောင့် ဘုရားက အချိန်စောင့်ပေးခဲ့ရတယ်။ ဆုတ်ကပ်ကာလ အသက် တစ်ရာတမ်းရောက်မှ ဘုရားရော သာဝကတွေရော ပါရမီပြည့်ချင်း တူလို့ဘုရားဖြစ်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် သက်တမ်းတိုလွန်းလို့ဘုရားက သာဝကအကုန် ချေချွတ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဘုရားကိုယ်စား ပူဇော်ဖို့တရားစာပေနဲ့စေတီလေးမျိုး ထားခဲ့တယ်။ သာသနာနှစ် ၅၀၀၀ ပြည့်တဲ့အခါ ဘုရားချန်ထားခဲ့တဲ့ ဓါတ်တော် စေတီတွေ က နိမ္မိရုပ်ပွားအ့ဖြစ် စုပြီး တေဇောဓါတ်လောင်မယ်။ (ဂေါတမဘုရား သာသနာကွယ်မယ်ပေါ့)
ခု လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တီထွေးဘဝတွေက လွတ်အောင် ရုန်းလို့ ရတယ်။ ဘုရားကိုယ်စားရုပ်ပွားတော် ဖူးခွင့်ရတယ်။ ဗုဒ္ဓ ပြောခဲ့တဲ့စကား ဟောခဲ့တဲ့ တရားတွေကို စာပေအဖြစ် (ပိဋကတ်သုံးပုံ) မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေကို ပူဇော်လို့ရသေး တယ်။ တကယ် တီထွေး မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တာ့ အခုပဲ ဗုဒ္ဓတရားတွေကို “ဧဟိပတိကော=လေ့လာပါ အကာလိကော= လက်တွေ့ ကျင့်ကြတော့ပါပေါ့။”
မေတ္တာ စေတနာများစွာဖြင့် (မှတ်ချက်၊။ နိမ္မိတဇောဓါတ်လောင်တဲ့အချိန်မှာ လူသား တစ်ယောက်မှ ဖူးခွင့်မကြုံပါ နတ်ဗြဟ္မာများသာ ပူဇော်ခွင့်ရမည်)
မူရင်းရေးသားသူ (လေးစားစွာဖြင့် Blacker)
လှနျ ခဲ့တဲ့ သာသနာနှဈ ၂၆၀၀ ခနျ့ က ခု လူဖွဈနသေူအားလုံး ဂိဇ်ဈကုဋျတောငျမှာ တီထှေးဘဝနဲ့အတူဆုံဖူးကွတယျ ဆိုရငျ လကျခံကွလား?? လက်ခံ မခံ အသာထား ဗဟုသုတ ပွောပွမယျ! ဂေါတမ ဗုဒ်ဓဘုရား ပှငျ့စဉျ အခြိနျတဈခုက “အရှငျသာရိပုတ်တမထရျေနဲ့ ဗုဒ်ဓ ဂိဇ်ဈကုဋျတောငျကို ရောကျစဉျက တောငျခွကေ တီထှေးစုကွီးကို သှားမွငျတယျ တီထှေး တှေ မြားလှနျးလို့အံ့သွလို့ အရှငျသာရိပုတ်တက ဘုရားကို ဒီတီထှေးတှအေကွောငျး မေးလြှောကျတယျ”
ဗုဒ်ဓက “ခဈြသား သာရိပုတ်တ” ဒီတီထှေးတှကေ “ငါဘုရားပရိနိဗ်ဗာနျစံပွီး သာသနာနှဈ ၅၀၀၀ အတှငျးလူ့ ပွညျမှာ လူဖွဈပီး အခြို့ ကြှတျတနျးဝငျကွလိမျ့မယျ… ဒီတီထှေးတှေ လူဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ ရုပျဝတ်ထုတှကေ နတျပွညျအလား တိုးတကျမယျ လောဘ ဒေါသ မောဟတှတေော့ အားကွီးမယျ။ အခြို့ တှကေ ငါဘုရားရဲ့ တရားတှနောပွီး ကြှတျတနျးဝငျကွမယျ။ ကနျြလူမြားကတော့ ဒီ ဂိဇ်စကြုဋျတောငျခွမှောပဲ တီထှေးပွနျဖွဈမယျ “လို့အရှငျသာရိပုတ်တကို ဗုဒ်ဓဟောပွခဲ့ဖူးတယျ။
ပွီးတော့ ဂင်ျဂါဝါဠုသဲစုမက ပှငျ့ပွီးတဲ့ဘုရားရှငျတှကေ သာသနာခနျြတာ သိပျမရှိပါဘူး။ ဂေါတမဘုရားရှငျသာ အခွအေနေ တဈခုကွောငျ့ သာသနာခနျြခဲ့တာ… သကျတမျးတဈသောငျးတုနျးက ဘုရားက ပါရမီပွညျ့လို့ ဘုရားဖွဈခှငျ့ကွုံတယျ။ ပါရမီ ဖွညျ့ဘကျ သာဝကတခြို့က ပါရမီ မပွညျ့သေးတာကွောငျ့ ဘုရားက အခြိနျစောငျ့ပေးခဲ့ရတယျ။ ဆုတျကပျကာလ အသကျ တဈရာတမျးရောကျမှ ဘုရားရော သာဝကတှရေော ပါရမီပွညျ့ခငျြး တူလို့ဘုရားဖွဈရတယျ။
ဒါပမေယျ့ သကျတမျးတိုလှနျးလို့ဘုရားက သာဝကအကုနျ ခခြှေတျခှငျ့ မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ဘုရားကိုယျစား ပူဇျောဖို့တရားစာပနေဲ့စတေီလေးမြိုး ထားခဲ့တယျ။ သာသနာနှဈ ၅၀၀၀ ပွညျ့တဲ့အခါ ဘုရားခနျြထားခဲ့တဲ့ ဓါတျတျော စတေီတှေ က နိမ်မိရုပျပှားအ့ဖွဈ စုပွီး တဇေောဓါတျလောငျမယျ။ (ဂေါတမဘုရား သာသနာကှယျမယျပေါ့)
ခု လကျရှိအခြိနျမှာတော့ တီထှေးဘဝတှကေ လှတျအောငျ ရုနျးလို့ ရတယျ။ ဘုရားကိုယျစားရုပျပှားတျော ဖူးခှငျ့ရတယျ။ ဗုဒ်ဓ ပွောခဲ့တဲ့စကား ဟောခဲ့တဲ့ တရားတှကေို စာပအေဖွဈ (ပိဋကတျသုံးပုံ) မှတျတမျးတငျထားတာတှကေို ပူဇျောလို့ရသေး တယျ။ တကယျ တီထှေး မဖွဈခငျြဘူးဆိုရငျတာ့ အခုပဲ ဗုဒ်ဓတရားတှကေို “ဧဟိပတိကော=လလေ့ာပါ အကာလိကော= လကျတှေ့ ကငျြ့ကွတော့ပါပေါ့။”
မတ်ေတာ စတေနာမြားစှာဖွငျ့ (မှတျခကျြ၊။ နိမ်မိတဇောဓါတျလောငျတဲ့အခြိနျမှာ လူသား တဈယောကျမှ ဖူးခှငျ့မကွုံပါ နတျဗွဟ်မာမြားသာ ပူဇျောခှငျ့ရမညျ)
မူရငျးရေးသားသူ (လေးစားစှာဖွငျ့ Blacker)